Waa maxay Jimmy Kimmel's Net Worth? Ogow Xaaladiisa Dhaqaale - Madadaalo
Waa maxay Jimmy Kimmel's Net Worth? Ogow Xaaladiisa Dhaqaale
Jimmy Kimmel Mushahar
Nolosha Qof ahaaneed
Jimmy Kimmel waa majaajiliste iyo majaajiliistaha telefiishanka Maraykanka ah oo haysta hanti dhan $50 milyan. Waxaa sidoo kale loo yaqaan Jimmy Kimmel Live. Jimmy Kimmel waxa lagu doodi karaa in si weyn loogu yaqaanay shaqadiisa daadihiyaha barnaamijka hadalka majaajilada ah ee habeen dambe Jimmy Kimmel Live, kaas oo uu sannadkii mushahar ahaan u qaato $15 milyan.
Tan iyo 2003, wuxuu u adeegay sidii martigeliyaha bandhigga. Doorarkiisii ​​hore waxaa ka mid ahaa wada-shaqaynta Bandhigga Man iyo u adeegida sidii garab-ku-ciyaareed Lacagta Win Ben Stein. Waxa uu bilaabay mihnadda madadaalada isagoo ah shaqsi raadiyaha.
Jimmy Kimmel wuxuu ku dhashay Noofambar 13, 1967, Brooklyn, New York, waxaana u dhashay James Christian (Jimmy) Kimmel iyo xaaskiisa, Lisa. Kimmel wuxuu ahaa kii ugu da'da weynaa saddex caruur ah, wuxuuna ku koray qaybta Mill Basin ee Los Angeles ilaa qoyskiisu u guureen Las Vegas markii uu jiray sagaal sano.
Waxa uu ka qalin jabiyay Dugsiga Sare ee Ed W. Clark oo uu muddo hal sano ah wax ka bartay Jaamacadda Nevada, Las Vegas, halka uu laba sannadoodna ka qaatay Jaamacadda Gobolka Arizona, oo uu markii dambe shahaado sharaf ka qaatay Jaamacadda Nevada, Las Vegas.
Markii Kimmel uu weli ku jiray dugsiga sare, wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo idaacad, laga yaabee inuu saameeyay David Letterman maalmihii hore ee raadiyaha. Intii uu ku jiray kulliyadda, waxa uu sii watay waxbarashadiisii ​​oo waxa uu helay jagadiisii ​​raadiyaha ee ugu horaysay ee uu mushaharka qaato isaga oo ka qaybqaata barnaamijka subaxii ee The Me and Him Show ee KZOK-FM ee Seattle, halkaas oo uu ilaa maanta ka shaqeeyo.
Isaga iyo la-hawlgalayaashiisii, Kent Voss, ayaa laga eryay bandhigga 1990-kii, taasoo ugu horraysa natiijada ciyaaraha qaaliga ah ee ay labadooduba ku fulin lahaayeen telefishanka. Waxa uu go'aansaday in uu barnaamijkiisa ka dhiso Palm Springs, California, waxana uu raadsaday caawinta saaxiibkiisii ​​caruurnimadii Carson Daly si uu uga shaqeeyo layliyo bandhigga.
Jimmy ka dib wuxuu shaqo ka helay KROQ-FM ee Los Angeles, halkaas oo uu shan sano ku qaatay Jimmy the Sports Guy barnaamijkii subaxii ee Kevin iyo Bean, halkaas oo loogu yaqaanay Jimmy the Guy Guy.
Markii hore, Kimmel wax xiiso ah uma lahayn inuu ka sii shaqeeyo telefishanka. Natiijadii dadaalladiisa, waxaa loo shaqaaleysiiyay inuu xayeysiis hawada u sameeyo warfidiyeennada Fox wuxuuna bilaabay inuu u sameeyo waxyaabo xayaysiis ah.
Kimmel ka dib waxaa la siiyay booska Comedy Central's Win Ben Stein's Money ee 1997, halkaas oo uu ku ciyaaray majaajilada qosolka leh ee qof walba Ben Stein. Kimmel wuu aqbalay jagada.
Kooxda waxaa lagu abaalmariyay Emmy shaqadoodii sida Ciyaarta Bandhigga ugu Fiican. Isagoo wali ka shaqeynaya lacagta Win Ben Stein ee 1999, Kimmel wuxuu la shaqeeyay oo la wadaagay Bandhigga Man ee Adam Carolla, kaas oo laga sii daayay NBC.
Thanks to caannimadeeda, Kimmel iyo Carolla waxay awoodeen inay horumariyaan taxanaha Comedy Central Crank Yankers, kaas oo Kimmel uu sidoo kale u muuqdo jilaa cod ah oo badan oo ka mid ah jilayaasha khayaaliga ah ee bandhigga.
Jimmy Kimmel wuxuu si rasmi ah uga tagay Bandhigga Man 2003 wuxuuna sii waday inuu martigeliyo bandhiggiisa, Jimmy Kimmel Live, kaas oo si tartiib tartiib ah ugu koray caannimada oo noqday mid guul leh. Inkasta oo loo yaqaan si toos ah, bandhiggu run ahaantii ma sii daayo si toos ah.
Jimmy waxa uu caan ku yahay hab-dhaqankiisa qariibka ah iyo sidoo kale hab-waraysigiisa, kaas oo lagu tilmaamay mid qalafsan. Wuxuu leeyahay, sida inta badan martigeliyaha bandhigga hadalka, wuxuu ku lug yeeshay khilaafyo iyo khilaafyo dhowr ah.
David Letterman iyo Howard Stern waa laba ka mid ah saameyntiisa ugu weyn marka loo eego soo bandhigida, sida uu sheegay. Jimmy wuxuu sidoo kale ku jiray Larry King Life oo la noolow Regis iyo Kelly oo ah martigeliyaha martida, iyo bandhigyo kale.
Iyada oo qayb ka ah diyaargarowgiisa dambe, wuxuu maalin kasta u safri jiray inta u dhaxaysa New York iyo Los Angeles shan maalmood oo isku xigta, isagoo jabiyay rikoorka Guinness World Record masaafada ugu badan ee safarka hal usbuuc shaqo gudaheed.
Waxa kale oo uu naftiisa u aas aasay marti-geliyaha abaalmarinta caanka ah, isagoo martigeliyay Abaalmarinta Akadeemiyada 2017 iyo sidoo kale Abaalmarinta Emmy Awards ee labadaba 2012 iyo 2016. Waxa uu martigeliyay Abaalmarinta Muusikada Mareykanka shan sano oo isku xigta.
Xiddig sharaf leh oo ku sugan Hollywood Walk of Fame, oo ku yaal 6840 Hollywood Boulevard, ayaa la siiyay Kimmel 2013.
Lacagtu waa $15 milyan. [Sannad kasta]
Markii Hugh Hefner uu ku dubanayay Naadiga Friars' Club ee New York, Jimmy wuxuu ahaa maamulaha roastmaster-ka ee mas'uulka ka ah dhacdada. Intaa waxaa dheer, wuxuu soo bandhigay dhowr majaajillo Central duban. Intii lagu jiray xilli ABC's Dancing With the Stars, Kimmel wuxuu sameeyay muuqaal. Set for Life, bandhiga ciyaaraha ee Jimmy Kimmel u soo bandhigay ABC, oo la sii daayay 2007dii.
Intii lagu jiray 2007 Taco Bell All-Star Legends iyo Ciyaarta Kubadda Cagta ee caanka ah ee San Francisco, Kimmel waxa uu maareeye ka noqday Ururka Qaranka. 2004, iyo 2006, wuxuu ka qayb qaatay ciyaarta.
Lebron James iyo Jimmy waxay si wadajir ah u bixiyeen Abaalmarinnada ESPY 2007. Kimmel wuxuu bixiyaa shaqo cod ah filimaan firfircoon oo kala duwan, oo uu ku jiro Robot Chicken, kaas oo uu had iyo jeer ku dhawaaqo eeyaha.
Bishii Luulyo ee sanadkan, wuxuu daabacay buug carruurta loogu magac daray Goose Halis ah. Laga bilaabo Abriil 2020, Kimmel wuxuu martigelin doonaa taxane taxane ah oo bandhigga ciyaarta ah Yaa doonaya inuu noqdo Milyaneer.
Martida ku jirta Jimmy Kimmel Live ayaa waxaa ku jiray Kimmel adeerkiis Frank Potenza iyo ina-adeerkii Sal Iacono si joogto ah. Kimmel waxa uu guursaday Gina Maddy 1988 ilaa 2002, waxayna u dhaleen laba caruur ah. Katherine iyo Kevin, carruurtooda, ayaa ah farcanka keliya ee lammaanaha.
Laga soo bilaabo 2002 ilaa 2009, wuxuu xidhiidh la lahaa atariishada Sarah Silverman. Bishii Luulyo 2013, wuxuu guursaday Molly McNearney, oo uu u leeyahay laba carruur ah, Jane iyo William John.
Ilmahoodu waxa uu ku dhashay xanuun aan caadi ahayn oo ku dhasha wadnaha, waxana uu maray qaliin lagu guulaystay isaga oo jira saddex maalmood kadib markii uu ku dhashay. Isla markii uu ku soo noqday barnaamijka, Kimmel waxa uu daawadayaashiisa la wadaagay khibradiisa murugada leh.
Waa xubin firfircoon oo ka tirsan Kaniisadda Katooliga iyo taageeraha Xisbiga Dimuqraadiga. Wuxuu si cad uga hadlay xanuunka maandooriyaha iyo sida ay u saamaysay.
Hugh Jackman's Net Worth & Wax kasta oo aad u Baahan Tahay inaad Ogaato
Waa maxay Stone Cold Steve Austin's Net Worth 2022?
Waa ayo Alicia Keys? Waa maxay Kharashkeeda saafiga ah?
Jimmy waa mulkiilaha guryo badan oo ku yaal gobolka Los Angeles. Sannadkii 2004tii, Jimmy waxa uu $2.175 milyan ku kharash gareeyey hanti ku taal Badweynta Hermosa, California, taas oo ahayd dhawr baloog oo xeebta u jirta. 2014, wuxuu ku qaatay $2.25 milyan hantida labaad ee Hermosa Beach, California.
Muddo, wuxuu lahaanshaha hantida ku wareejiyay walaashii xaaskiisa. Sannadkii 2018, wuxuu ku qaatay $8.2 milyan guri kale oo ku yaal Xeebta Hermosa, California. Waxaa jira guri yar oo 2,200 cag laba jibbaaran ah oo ku yaal dhulkan kaas oo u adeega deegaan la dego.
Guri guri mustaqbalka laga yaabo inuu cabbirkiisu dhan yahay 20,000 cagood oo laba jibbaaran, marka loo eego qorshayaasha iibka. Jimmy waxa kale oo uu leeyahay $7.1 milyan hanti laba baakidh ah oo ku taal Hollywood Hills, kaas oo ku yaal meel ka sarraysa hudheelka caanka ah ee Chateau Marmont.
Richard Saghian Net Worth - Da'da, Shaqada, Nolosha Hore & Wax ka badan!
Waa maxay Bachelor ee Xilliga Jannada 7 waa wax ku saabsan?
sida loo xiro barnaamijyada ku jira ios 10
filimada qulqulka cusub ee bilaashka ah ee tooska ah
waa maxay emulator -ka android ee pc
daawo filimada bilaashka ah ee internetka xayeysiis la'aan
sida loo helo robux bilaash ah mobilada roblox
koontada netflix iyo furaha sirta ah
sida loo abuuro koonto netflix oo lacag la'aan ah